Jiro LED UV hanadio rano → Acuva • Yachts • Campers • Trano
Jiro LED UV - mianatra momba ny mahomby sy ho an'ny mpampiasa revolisionera teknolojia fanadiovana rano!
Ahoana ny fanadiovana ny rano?
Ny zavatra voalohany tonga ao an-tsain'ny tsirairay dia ny mamela azy io hamaky ny sasany sivana.
Ny maloto dia hijanona eo amin'ny sivana ary hadio isika rano.
Na izany aza, ny zavatra tokony hatao amin'ny toe-javatra toa madio ny rano, ary ny atiny dia miteraka fanimbana, ary mampidi-doza amin'ny fahasalamantsika mihitsy aza virosy, bakteria ary zavamiaina bitika hafa?
Ny fandalovana azy amin'ny sivana fotsiny dia tsy hanao na inona na inona. Raha izany dia, tsy maintsy diovina ny ranoary tsy sivana fotsiny.
Aza manivana ny rano - diovy!
Ny fanadiovana, ny fitsaboana na ny famonoana otrikaretina dia dingana sarotra toa azo atao, ohatra, amin'ny alàlan'ny fampiasana akora simika.
Maro amin'izy ireo no misy fiantraikany ratsy amin'ny tontolo voajanahary, indrindra ireo zavamananaina anaty rano. Izahay koa tsy te-hanapoizina ny tenantsika amin'ny akora simika ary handany rano tsy mety ritra miaraka amin'ny fofona mampatsiahy ny atin'ny farmasia.
Ka inona no hampiasaina?
Afaka Ozone ianao. Ny fitsaboana Ozone dia manadio ary tsy miandany amin'ny tsiron'ny rano. Na izany aza, sarotra ny maka sary an-tsaina ny fitrandrahana rano ao an-trano.
Ka ahoana, haingana, mora, mahomby, amin'ny fomba maloto amin'ny tontolo iainana sy tsy misy tsirony ny rano madio ao an-trano… amin'ny tobin'ny tobim-piantsonana, amin'ny yacht, any amin'ny birao ary amin'ny fivarotana?
Jiro LED Acuva UV
Manolotra anao orinasa mandroso ara-teknolojia izahay Acuva. Izahay no mpizara mivantana sy mivantana ny vokatra Acuva eo amin'ny tsena poloney.
Acuva dia kitapo fanadiovana rano ampiasaina Jiro LED UV. Ireo no vokatra farany namboarina natao tany Canada.
Fanadiovana rano ny fampiasana ny rafitra Acuva dia mitovy In-100 mahomby kokoa noho ny mampiasa fomba mifaninana.
Ankoatr'izay, ny fampiasana ny Jiro LED UV mahatonga ny vokatra Acuva ho vahaolana mety, tsy ho an'ny trano sy ny birao ihany, fa tsara amin'ny fanadiovana rano amin'ny yacht na amin'ny motera.
Ny fanadiovana rano amin'ny alàlan'ny Acuva UV-LED dia mifototra amin'ny fahalalana ara-teknika farany sy tena ekolojika. Tsy misy akora simika, toy ny klôro, atsofoka ao anaty rano.
deletes 99,9999% ny bakteria viriosy sy otrikaretina
Ny rano ihany dia mandeha amin'ny famonoana otrikaretina, vokatr'izany 99,9999% ny bakteria, viriosy ary ny otrikaretina hafa rehetra no esorinaizay mety hiteraka olana ara-pahasalamana ary handalo mora foana amin'ny sivana rano mahazatra.
Amin'ny alàlan'ny fanadiovan-drano Acuva UV LED dia afaka mandany rano amin'ny renirano sy farihy an-tendrombohitra isika tsy hatahotra sao harary isika noho ny fihinanana bakteria, virus na mikraoba monina ao anaty rano. Jiro LED UV hamono viriosy, ao anatin'izany SARS-COV-2ary bakteria mety hiteraka olana amin'ny vavony.
Ny fanadiovana rano amin'ny fampiasana jiro UV-LED dia tsy misy fiantraikany amin'ny tsirony. Ny bakteria, ny viriosy ary ny otrikaretina dia maty, saingy tsy miova ny fitambaran'ny rano. Tsy misy zavatra ampidirina, noho izany ny rano dia nitovy nitovy tamin'ny tamin'ny nanadiovana azy. Tsy miova koa ny fofony sy ny lokony. Ny manadio Acuva UV-LED dia tsy manao afa-tsy ny manazava azy.
Ny fanadiovan-drano dia misy amin'ny fitsaboana azy amin'ny halavan'ny halavan'ny lava, eo anelanelan'ny 250 sy 280 nm. Ny fipoahana toy izany dia mahatonga ny ADNan'ny zavamiaina bitika monina ao anaty rano. Vokatr'izany dia nodiovina ny rano. 99,9999% amin'ny bakteria, viriosy ary otrikaretina hafa rehetra no maty.
Ny teknolojia famonoana otrikaretina mampiasa jiro UV amin'izao fotoana izao dia mivoatra fatratra ary mihombo amin'ny faritra samihafa amin'ny toekarena.
Na izany aza, tsy mila fantarinao akory izany, satria mora ny mampiasa ny rafitra LED LED Acuva UV. Tsy mila miatrika zavatra sarotra. Tsy mila mahatadidy na inona na inona ianao. Ny mpanadio rano Acuva UV LED dia ampiasaina amin'ny fomba mitovy amin'ny paompy mahazatra.
Ankoatr'izay, ny rafitra fanadiovan-drano Acuva UV-LED dia kely habe. Kely ny toerana halain'izy ireo, noho izany izy ireo dia tonga lafatra ho an'ny karajia, mpandeha an-tsambo ary amin'ny sambo, sambo ary yachts.
Izy ireo dia azo ampiasaina mora foana amin'ny trano fahavaratra, fivarotana, birao, trano fisakafoanana, ary koa trano tokana sy ankohonana.
Tsy toy ny sivana rano, ny jiro UV-LED dia tsy misy fikojakojana.
Tsy mila manadio na manolo zavatra hafa ianao. Tsy misy mahasakana. Tsy ilaina ny mifehy ny haavon'ny loto amin'ny sivana. Eto, ny jiro UV-LED dia mamirapiratra ambonin'ny rano.
Ny fampiasana jiro fluorescent LED dia miampy iray lehibe ho an'ny mpampiasa. Izy io dia misy fiatraikany tsara amin'ny fiasa tsy misy fikojakojana ny rafitra fitsaboana rano iray manontolo.
Acuva Arrow 5 UV-LED - fanadiovan-drano amin'ny paompy
Serivisy mandritra ny 10+ taona
Manana antoka maharitra sy androm-piainany izy io. Ny takamoa mahazatra dia tokony soloina matetika. Ny jiro fluorescent LED dia manana garantie 10+ taona, aza manafana, miasa avy hatrany aorian'ny famaranana ary aza may.
Mifanohitra amin'ireo jiro vita amin'ny teknolojia nentim-paharazana, ny vokatra Acuva UV-LED koa dia sariaka kokoa amin'ny tontolo iainana, satria tsy misy mercury amin'ny jiro LED.
Acuva Arrow 5 UV-LED - fanadiovan-drano
UV-LED koa dia manana fanjifana herinaratra ambany kokoa noho ny rafitra UV mifototra amin'ny takam-bolan-tsekoly nentim-paharazana. Ny rafitra Acuva UV-LED dia namboarina mba hampandehanan'ny bateria. Izy ireo dia afaka mifandray amin'ny herinaratra 12V ary koa AC DC.
Acuva dia manolotra vokatra mifanaraka amin'ny karazana fampiasana rehetra. Avy amin'ireo karazana fanadiovan-drano UV-LED isan-karazany dia afaka misafidy fitaovana ianao, ohatra: manana 5 litatra isa-minitra sy fiainana fanompoana 900 litatra.
Acuva Eco NX-Silver UV-LED - fanadiovan-drano amin'ny paompy
Aza miahiahy intsony momba ny rano anaty tavoahangy ao amin'ny yacht na karavananao. Mampiasà rano ivelan'ny tsipika ary diovy alohan'ny hisotroana amin'ny alàlan'ny rafitra famonoana otrikaina UV-LED Acuva. Ankafizo ny rano fisotro madio tsy misy pentina eo amin'ny sambonao sy amin'ny RV na trano fialan-tsasatrao tsy misy rano.
Misafidy rafitra fanadiovana rano Acuva UV-LED ianao dia misafidy vokatra avo lenta izay manome rano madio sy tsy madio ho an'ny tranonao, sambo na motera anao.
Jiro LED UV vs. Jiro UV
Ny teknikan'ny fitsaboana rano UV mahazatra dia mampiasa jiro mercury UV. Na izany aza, misy ny ahiahy lehibe momba ny fiantraikan'ny tontolo iainana sy ny fetran'ny jiro UV.
5 / 5 ( 3 vato )
acuvaacuva ecoacuva eco uv ledacuva nitarika rafitra fanadiovan-drano uvrafitra fanadiovana acuvateknolojia acuvaacuva teknolojia incAcuva UV LEDmpanadio rano acuva uvrano acuvasivana rano acuvarafitra fanadiovan-drano acuvampanadio rano acuvarafitra fitsaboana rano acuvaJiro allegro uvJiro UV ny germicidalJiro mikraoba UV LEDJiro UV an'ny germika ho an'ny ranofanadiovana rano biolojikaManimba ve ny jiro tarihinaomanimba ve ny jiro uv?famonoana ranofamonoana otrikaretina ranodisinfection ranofomba famonoana ranofanimbana rano fisotrofamonoana ranofamonoana rano ny tanky fisotro ranofanadiovana ny rano ao an-tranojiro namboarina ho an'ny fanamorana ny ranojiro mikraobajiro namboarina sy uvnitondra jiro UV taratranitondra jiro uvtaratra uv jiro hevitraJiro UVuv na jiro taribyjiro UV ho an'ny ranouv sy jiro mandehajiro namboarina uvuv taratra jiro hevitraentina anaty ranojiro uv tsara indrindrajiro namboarina uv tsara indrindrafanadiovana ranofitsaboana rano rotsakoranafanadiovana rano fisotrofitsaboana rano indostrialyfanadiovana rano velonafanadiovana rano ao an-tranofanadiovana rano amin'ny fantsakanafanadiovana rano fisotrofanadiovana rano amin'ny fantsakanafanadiovana ranoSterilizer UVmpanadio rano ultravioletuv nodiovina tamin'ny ranofitsaboana nitarina ranorafitra fitsaboana rano uvfanadiovana rano tarihin'i uvorinasa manadio ranoinona no voamarina nsfrano amin'ny yachtrano ao amin'ny moterataratra jiro ho an'ny jiro uvtariby namboarina ho an'ny jiro uv